Herisetra ara-nofo :: Zazavavy 11 taona intelo naolan’ny raikeliny • AoRaha
Ny raikeliny ihany no voatondro ho nametaveta sy nanolana ny zazavavy iray, iraika ambin’ny folo taona, tany Sainte-Marie, ny herinandro lasa teo. Fantatra tamin’ny famotorana fa efa intelo niharan’ny herisetra ara-nofo nataon’io lehilahy, enina amby dimampolo taona, io ilay zazavavy. Tsy afa-maina ity voatondro ho mpanolana fa naiditra am-ponja vonjimaika, taorian’ny fanadihadiana vita afak’omaly.
Niroso tamin’ny fanadihadiana ny polisy tany SainteMarie, tamin’ny sabotsy lasa teo, noho ny fitarainana sy fitoriana nataona renim-pianakaviana iray fa niharan’ny fanolanana ny zanany vavy. Nosamborina ny lehilahy iray voarohirohy tamin’izany.
“Gaga ilay renim-pianakaviana nahita ny vola teny antanan-janany. Nanontaniana momba io vola io sy ny nahazoany izany ilay ankizivavy. Nilaza ity farany fa ny raikeliny no nanome ny vola. Naolan’io raikeliny io izy ary norahonany tsy hilaza amin’olona sady nomeny vola”, hoy ny polisy any an-toerana nanao ny famotorana. Tamin’ny fotoana nandehanan-dreniny tany an-tsaha, tamin’ny alatsinainy 3 aogositra lasa teo, no nanararaotan’ilay raikely nanaovany ny filàndratsiny.
Fiparitahan’ny fitaovam-piadiana :: Basy roa arivo mahery tra-tehaka tany Fianarantsoa